September 2012 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Thursday, September 6, 2012
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းနဲ့ excel လိုမျိုး ဇယားနဲ့ပတ်သက်တာ၊ စာရင်းနဲ့ပတ်သက်တာကို ရေးနိုင်ဖို့၊ တွက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ android phone အမျိုးအစားများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ install လုပ်နည်းကတော့ သိမှာပါ memory card ထဲကိုထည့်ပြီး ဖုန်းထဲကနေ install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က ပြောပါတယ် ကိုညီနေမင်းတဲ့ software တွေကို သူများရေးထားတာတွေကို လိုက် share လုပ်နေမယ့်အစား ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး share လုပ်တာက ပိုအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ပြုံးမိပါတယ်။ software တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဟပ်ချလောင်းဆိုပြီး ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်း programmer တွေ ပေါင်းစုပြီးရေးမှ တနည်းအားဖြင့် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထွက်လာတဲ့ အကြံဥာဏ်နဲ့လုပ်တဲ့ software တွေဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရေးတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ software တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ cracking အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းလေ့လာထားရပါတယ်။ အဲ့လို အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးတာထက် ထွက်နေတဲ့ software တွေကို ပြည်သူတွေ လက်လှမ်းမီအောင်၊ အသုံးပြုနိုင်အောင် အရင်လုပ်ပေးတာက ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် တစ်ချို့ဆိုရင် pagemaker နဲ့ excel လောက်ပဲ သုံးတတ်ပြီး ဘယ် software က ဘာအတွက်သုံးတယ် ဆိုတာတောင် မသိကြပါဘူး။ အရမ်းလွယ်တဲ့ converter ကိုတောင် ဘာအတွက်သုံးတာလဲ။ ဘယ်လိုသုံးရလဲ မသိကြပါဘူး။ အဲ့တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ အခုလို နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ အသုံးပြုရပိုလွယ်ကူလာတဲ့ software တွေကို သုံးစေချင်တယ်။ ကွန်ပျူတာလုံခြုံဖို့အတွက် ထပ်ဆင့်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ security software တွေကို မျက်ခြေမပြတ်စေချင်တာပါ။ အဲ့တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကော software အားလုံးကို သုံးနိုင်ပြီးလား စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ adobe company က ထုတ်လုပ်တဲ့ software တစ်မျိုးထဲကိုပဲ သာဓက စမ်းစစ်လိုက်ပါ။ ဒီပို့စ်မှာ ကွန်မန့်ပေးထားတာ တွေ့လို့ပါ။ Adobe Photoshop® CS6
Adobe Media Encoder CS6 ကျွန်တော်က ထောက်ပြယုံသက်သက်ပါ။ သူများထုတ်ထားတဲ့ software တွေကိုတောင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အဆင့်မီမီ မသုံးနိုင်သေးပါဘူး။ အရင်ဆုံး software တစ်ခုကို မရေးခင် သူများရေးထားတဲ့ software ရဲ့ သဘောတရားအခြေခံကို အရင်လေ့လာရပါတယ်။ ကျွန်တော် မှားတာရှိရင် ထောက်ပြနိုင် ပါတယ်။ သင်ယူဖို့အသင့်ပါ။
ဒီ android application လေးကတော့ ကလေးလည်းကြိုက် လူကြီးလည်းကြိုက်ပါ။ စိတ်ရှုပ်လာလို့ ရီချင်ရင် ဒီ application ကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုပြောသမျှကို သူလိုက်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအသံထွက်လဲ ဘယ်လိုပြန်ပြောသလဲ စမ်းကြည့် လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကြည့်လို့ နည်းနည်းခေါင်း မူးနောက်နောက် ဖြစ်လာရင် ဒီကောင်လေးနဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီး နည်းနည်း ရီလိုက်ရင် ခေါင်းပေါ့သွားတာပါပဲ။ Minus | Mediafire | Filecloud
ကဲ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကနေ ချက်တင်ချက်လို့ရသလို၊ ဖုန်းထဲကနေ ဘယ်ဝဘ်ဆိုက်ကိုမဆို မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဆိုက်ကို ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အထဲမှာ keyboard နှစ်မျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်။ FrozenKeyboard_1.1.3.apk (မြန်မာစာ zawgyi keyboard) ယခုကျွန်တော်တို့သုံးနေသည့် keyboard ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က သုံးမျိုးထဲမှာ Zawgyi_One.apk ကို မဖြစ်မနေ install လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ FrozenKeyboard_1.1.3.apk ကို install လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ install လုပ်တာက လွယ်ပါတယ်။ memory card ထဲကို ထည့်ပြီး ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးတာနဲ့ Frozen keyboard ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို အမှန်ခြစ်ပေးပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ font မှာ zawgyi_one ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်း restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာရင် အားလုံး ရိုက်လို့ရပါပြီ။ အဆင်မပြေသူများ ကျွန်တော့်ကို ကွန်မန့်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်းဆီ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်။ အခုတော့ အလုပ်များနေလို့ မရှင်းပြနိုင်တာ တောင်းပန်ပါရစေ။ ပြီးရင် ဖုန်းကို restart ဘယ်လိုချလဲကိုပါ ကျွန်တော် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းအတွက်ကိုလည်း ထည့်ရေးပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Download Zawgyi Keyboard and font
USB Disk Security 6.2 (တင်ပေးမည့် ပုံစံပါသဖြင့် မဖြစ်မနေဖတ်ပေးပါ)
autorun နှင့် အခြားသော autorun virus များကို သတ်ပေးတဲ့ usb disk security latest version 6.2 ပါ. virus တော်တော်များများကို auto run နှင့်ရေးကြတာများပါတယ်. ရေးနည်းကလည်း လွယ်တော့ auto run နဲ့ပဲ ရေးကြတဲ့အတွက် အခု ဒီ antivirus tool ကို သုံးပြီး ထည့်ထားပါ. အရေးကြီးပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ တင်ပေးထားတာ 6.1 ရှိမယ်ထင်တယ်။ သုံးနည်းကတော့ အထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး. အထဲမှာ keygen ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်. ဥပမာ- 20034 ဆိုပြီး တစ်ဖိုင် 20034-k (or) 20034-s (or) 20034-c (or) 20034-p အဲ့လိုမျိုး ပါလာပါလိမ့်မယ်. အဲ့လိုမျိုး တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုပါလာပါလိမ့်မယ်. အဲ့တော့ Download မလုပ်ခင် သိထားရမှာက 20034 ဆိုပြီး နောက်က ဘာမှ မပါလာရင် software ပါ
20034-k ဆိုတာ k = keygen
20034-s ဆိုတာ s = Serial Number
20034-c ဆိုတာ c = crack
20034-p ဆိုတာ p = Patch ဆိုတာကို သိထားပေးပါ. license version (or) Full version ဖြစ်ဖို့ အဲ့ (4)နည်းပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် နောက် တင်သည့် ပို့စ်တွေမှာတော့ ဘာနဲ့ license version လုပ်မယ်ဆိုတာကို ရေးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Download လုပ်တဲ့ဖိုင်မှာပဲ ကြည့်ပါ။ ခေါင်းစဉ်မှာ တတ်နိုင်ရင် မြန်မာလိုပါ ရောရောပြီး ထည့်ပေးပါ့မယ်။ ကဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
USB Disk Security 6.2 (တင်ပေးမည့် ပုံစံပါသဖြင့် မြ...